We.com.mm - ဘယ်သူ့ကို အကြိုက်ဆုံး အချစ်ဆုံးလဲ?
ကဲကဲ အိုပါးတို့ရေပြောကြနော်။ အခုဘယ်သူ့ကို အကြိုက်ဆုံးအချစ်ဆုံးလည်း မှန်မှန်ပြောကြနော်။ အားလုံးက ပင်ကိုအလှတစ်မျိုးစီလေးနဲ့ လှနေကြတဲ့သူလေးတွေပါပဲ။ ဒီတော့ သူတို့လေးတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ ?
အရင်ဦးဆုံး အိုပါးတို့ရဲ့ ရင်ကို လှုပ်ခတ်စေတာကတော့ လုလုပါ။ လုလုဟာ အရင်ဦးဆုံး Facebook ပေါ်မှာ လှပကျော့ရှင်း Sexy ကျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာဆန်ဆန်အလှနဲ့အိုးပါးတို့ရဲ့ရင်ကို လှုပ်ခတ်စေမယ့်သူတစ်ဦး ထပ်ပေါ်လာပါပြီ။ လုလုပြီးတော့ အေးသောင်းပါပဲ။ ကဗျာတွေရေးရင်ကနေ ထပ်မံအောင်မြင်လာတဲ့ တစ်ချိန်ကအနုပညာရှင် အေးသောင်းလေးကတော့ မြန်မာဆန်ဆန်အလှအပတွေနဲ့ အိုပါးတို့ကြွေတဲ့အထိကိုဖြစ်နေပါတယ်။
လူကိုသေသေချာချာမမြင်ခဲ့ရတုန်းကတော့ သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့အသံကြောင့် အကုန်လုံးကကြွေနေခဲ့ရပါတယ်။ အခူသူရဲ့ပုံတွေ Facebook မှာမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ ချစ်ရာမျက်နှာလေးနဲ့ ချိုသာတဲ့ အပြုံးလေးကြောင့် အိုပါးတို့ရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ Mary Mary နဲ့ကိုဖြစ်နေပါပြီ။
ဒီတော့ အိုပါးတို့က လုလုတုန်းကလည်းလုလု အေးသောင်းတုန်းကလည်းအေးသောင်းအေးသောင်း Mary လည်းဆိုတော့ Mary Mary နဲ့ဆိုတော့ ဘယ်သူ့ကို ကြိုက်ကြတာလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Facebook သုံးစွဲသူလူတန်းစားတွေထဲမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ လူ ( ၆ ) မျိုး
လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်နေတဲ့ ကိုရီးယားဆယ်ကျော်သက် (၃)ဦး